Google AdWords vs. एसईओ: के राम्रो छ?
उत्तर तपाईंको व्यापारको प्रकृतिमा धेरै निर्भर गर्दछ. एसईओ वा Google AdWords - एसईओ वा गुगल ऐडवर्ड्स, पहिलो पटक निम्न सर्तहरू को परिभाषित गर्न को लागी, मूल्य निर्धारण र यातायातको लागि कुन बजार च्यानल अझ राम्रो छ भनेर विश्लेषण गर्नु अघि. यसले तपाईंलाई अझ राम्रो बुझ्न मद्दत गर्नेछ जुन तपाइँको मार्केटिंगको लागि उत्तम काम गर्ने काम गर्दछ.
गुगल एडवर्ड्स र एसईओ बीचको फरक के हो?
खोज इञ्जिन अनुकूलन साइटमा आगन्तुकहरूको संख्या बढाउन प्रयोग गरिने रणनीति र रणनीतिहरूको एक तरिका हो।. एसईओले प्रविधिहरूको प्रयोग जुन Google एल्गोरिदमलाई ट्वीक गर्नका लागि प्रयोग गर्दछ त्यसैले एक व्यक्तिको स्रोतमा खोजी इन्जिनमा उच्च रेटिङ हुनेछ।. यी विधिहरू बहुमूल्य कुञ्जीशब्दहरू प्रयोग गरेर, विश्वसनीय वेबसाइटहरू वा अन्य सम्बन्धित साइटहरूमा सामग्री जोडेर साथसाथै सम्बन्धित मेटा विवरणहरूको प्रयोग गरी समावेश गर्दछ.
Google AdWords, बारीमा, भुक्तानी विज्ञापनको प्रयोग गर्दछ. यस तरिकाले, वेबसाईट मालिकहरूले खोज इन्जिन भुक्तानी गर्नु पर्छ (चाहे गुगल, याहू वा बिंग) हो भने उनीहरूको स्रोत Google खोजी नतिजाहरूको शीर्षमा राख्नको लागि।. यो पनि ध्यान दिइनेछ कि साइट मालिकले प्रत्येक पटक प्रयोगकर्तालाई आफ्नो विज्ञापनमा क्लिक गर्दछन्.
चलो Google एडवर्ड्स र एसईओ को तुलना
हामी मूल्य तुलना संग शुरू गर्नेछौं. एसईओ को बारे मा महान कुरा यो छ कि यो प्रारम्भिक नि: शुल्क हुन सक्छ किनकी वहाँ को सबै भन्दा अधिक कार्यक्रमहरु को लागि कि एसईओ प्रविधिहरु संग मदद को भुगतान को आवश्यकता छैन. तपाईले गर्नु पर्ने एउटा मात्र चीज हो यो थाहा छ कि एसईओ विधिहरू तपाईंको स्रोतको लागि उत्तम काम गर्दछ र तिनीहरूलाई लागू गर्दछ.
तथापि, जब तपाईंको व्यवसाय विकास हुन्छ, तपाईले तपाइँको एसईओ पृष्ठहरुलाई बढावा गर्न ताकि तपाईले खेलमा रहन र प्रतियोगितालाई हराउन व्यावसायिक एसईओ सेवाहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।. जो कम्पनीहरु एसईओ क्षेत्र मा विशेषज्ञता छ र साल को लागि एक नै क्षेत्र मा काम गरेर अंतर्दृष्टि छ तपाईंको व्यापार को ध्यान र यो को आवश्यकता को प्रयास प्रदान गर्न सक्छन्.
गुगल एडवर्ड्स योजना को वेतन-प्रति-क्लिक प्रकार छ. यस योजनाको साथ, एकसँग एक निश्चित बजेट हुनेछ जुन प्रयोगकर्ताले विज्ञापनमा क्लिक गर्दा प्रत्येक पटक तिर्नेछन्. यसकारण, थप प्रयोगकर्ताहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, थप तपाईलाई तिर्न पर्छ. यद्यपि यो पहिले नै तपाइँको लागि एकदम महंगी लाग्न सक्छ, यदि तपाइँ यसलाई मुद्रण र म्याग्दी विज्ञापनहरू तुलना गर्नुहुन्न भने होइन.
दर्शकहरु र अनुयायीहरु को संख्या
निवेश मा रिटर्न देख्दा तपाईंलाई संभव संख्या को देखने को लागी Google AdWords र एसईओ दिन सक्छ. दुवै विधिहरूले उल्लेखनीय संख्याका दर्शकहरूलाई प्रदान गर्न सक्छ. AdWords फायदा, यस मामला मा, यो एक छोटो अवधि मा अधिक सुराग प्राप्त गर्न सक्छ. यद्यपि, यदि हामी लामो अवधिमा बाँध्यौं भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि मानिसहरूले कार्बनिक सर्च नतिजाहरूमा थप बगाए. तथ्यको सरल व्याख्या भनेको जैविक खोज हो कि प्रयोगकर्ताहरू खोज्दै छन्. यसलाई रकम दिनका लागि, एडवर्डले तपाईंलाई तुरुन्तै जानुपर्छ वा दर्शकहरूलाई दिनेछ, तर यो सङ्कलनको रूपमा SEO को रूपमा प्रदान गरिने छ जुन तपाईले संचित अवधिमा अधिक दर्शकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।.
गति को लागि, एडवर्ड एक बेहतर विकल्प हुनेछ. एसईओका लागी यो प्रयोगकर्ताले कार्बनिक खोज नतिजाहरु मार्फत तपाईंको वेबसाइट हेर्न को लागी केही समय लिन सक्दछ. एडवर्ड्स को लागी, तपाईं लगभग अगाडी बढ्न सक्नुहुनेछ किनकि गुगल एड्वर्ड्सले तपाईंको चुनिंदा जनसांख्यिकीयलाई लक्षित गर्न सक्छ. एसईओ जनसांख्यिकी लक्षित गर्दैन. कुन एसईओ गर्न सक्दछ भन्ने कुरा निश्चित छ कि तपाईंको वेबसाइट सान्दर्भिक छ र तपाईंको इच्छित लक्ष्य दर्शकहरूले यो पत्ता लगाउनेछन्.
मैले के छान्नु पर्छ: Google AdWords वा एसईओ?
अब तपाइँ प्रत्येक मार्केट च्यानलको फाइदाहरू थाहा छ, यो तपाईंको सजिलो लागि कुन राम्रो छ निर्धारण गर्न सजिलो हुनेछ. यदि तपाईं चाँडै सुत्न उत्पन्न गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने AdWords तपाईंको लागि उत्तम छनौट हुनेछ. यद्यपि, यदि तपाईं आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाई एसईओ प्रविधिहरू प्रयोगमा लगानी गर्नु पर्छ. नोट, मार्केटिङ च्यानलहरू दुवै हुन सक्छ जबसम्म तपाईले आफ्नो कुञ्जी प्रदर्शन संकेतक सेट गर्नुहोला र प्रत्येक मार्केट च्यानल को सफलता को लागी जारी राख्नु भयो Source .